Device ကိုထိန်းချုပ်ရေး TSL ကုန်ပစ္စည်းများဟန်ပြအိုင်ပီနဲ့ IBC 2019 မှာ NMOS နည်းပညာသရုပ်ပြ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Device ကိုထိန်းချုပ်ရေး TSL ကုန်ပစ္စည်းများဟန်ပြအိုင်ပီနဲ့ IBC 2019 မှာ NMOS နည်းပညာသရုပ်ပြ
Device ကိုထိန်းချုပ်ရေး TSL ကုန်ပစ္စည်းများဟန်ပြအိုင်ပီနဲ့ IBC 2019 မှာ NMOS နည်းပညာသရုပ်ပြ
အမ်စတာဒမ်, စကျတငျဘာ 5, 2019 - အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါအိုင်ပီ-based Workflows ဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းအသွင်ကူးပြောင်းမှုအဖြစ်ရှေ့တန်းမှမှာကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အဘို့ TSL ထုတ်ကုန်များ, ထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်သူ, ဒီဖြစ်ပေါ်နေသောစက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ဖြေရှင်းရန် system ကိုထိန်းချုပ်က၎င်း၏ In-depth အသိပညာလျှောက်ထားခဲ့သည်။ IBC 2019 (atရပ်နေ 10 ။B41), TSL က AMWA NMOS ပဏာမအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ခဲ့ပြီးသောအလုပ်၏အလငျး၌ ST-2110 အိုင်ပီကွန်ရက်မှာထိန်းချုပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲဝန်းကျင်က၎င်း၏စဉ်းစားတွေးခေါ်သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ TSL လည်းတစ်လောကလုံးထိန်းချုပ်မှုနှင့် display ကိုစနစ်များတစ်ခုတိုးချဲ့အကွာအဝေးအပြင်၎င်း၏အဆင့်မြင့်ထုတ်လွှင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားထုတ်ကုန်ရာပူဇော်သက္ကာကိုမှ updates များကိုတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်လိုင်းများပြအပြင်, ငါတို့သည်လည်း device ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်မှတ်ပုံတင်ရေး, ကိရိယာဆက်သွယ်မှုများနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဖြစ်ရပ်နှင့်တာလီချိုးစီမံခန့်ခွဲမှုအမှာစကားသောငါတို့တဲမှာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသရုပ်ပြ hosting နေကြတယ်" ဟုမာကုဒေးဗီးစ်, ထုတ်ကုန်များ၏ဒါရိုက်တာနှင့်နည်းပညာမှာပြောပါတယ် TSL ထုတ်ကုန်များ။ "ကျနော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုဖြေရှင်းချက်သူတို့ကဤစနစ်များပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ခွင့်ပြုမယ့်ထိန်းချုပ်ဂေဟစနစ်တည်ဆောက်နိုင်ပုံကိုအပေါ်ဖောက်သည်များနှင့်အတူနက်ရှိုင်းသော-ငုပ်ပြောဆိုမှုများကိုခွင့်ပြု, အထုတ်လွှင့်ကွင်းဆက်ကိုဖြတ်ပြီး key ကို applications များသို့ fit ကိုမည်သို့ဖေါ်ပြခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ "
TSL mater ထိန်းချုပ်မှု, ပလေးအောက်နှင့်ဂီယာအတွင်းက၎င်း၏အဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်ပြုသောပူဇော်သက္ကာထဲကအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောသစ်ကိုထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကား updates များကိုအသုံးပြုသူများကသူတို့အပေါ်မူတည်ကြောင်းဝေဖန် devices တွေကိုထိန်းချုပ်ယူခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်သတင်းကဏ္ဍထုတ်လုပ်မှုအလိုအလျောက်ရိုးရှင်းဖို့ ENPS နှင့် iNews နှင့်အတူ MOS ပေါင်းစည်းရေးပါဝင်သည်။ ပလေးအောက်ကိုအလိုအလျောက်အဘို့, ဖောက်သည်များယခုကုန်ကျစရိတ်-ထိထိရောက်ရောက်နဲ့အလွယ်တကူတိုက်ရိုက်ပရိုဂရမ်များအတွက်ဗီဒီယိုနှင့်ဂရပ်ဖစ်ပလေးအောက် devices တွေကိုကျော်ရိုးရှင်းပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူမူလတန်းသို့မဟုတ် backup လုပ်ထား / ကောလိပ်, တက္ကသိုလ်အလိုအလျောက်စနစ်များကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်သည့်အခါထို့အပြင်သုံးစွဲသူများကလည်းယခုအမှန်တကယ်အချိန်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များနှင့်အတူ SCTE ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ် automated ထိန်းချုပ်မှုကနေတဆင့်အားပညတ်တော်မူ၏, စီမံခန့်ခွဲအကူးအပြောင်းများနှင့်ဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်ထိန်းချုပ်မှုလမ်းကြောင်း၏အပွငျ, ဖောက်သည်များကိုဆိုလိုသည်လိုအပ်အဖြစ်သည် dynamically အလွန်, ချက်နဲ့အရွယ်မှာနှင့် Configure လုပ်လို့ရတဲ့ထိန်းချုပ်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံကိုဖန်တီးရန်မျိုးစုံထိန်းချုပ်မှုခန်းတို့တွင်အပလေးအောက်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်အရင်းအမြစ်များနှင့်ထိန်းချုပ်မှု access ကိုခွဲဝေချထားပေးရန်နိုငျသညျ, သီးသန့်အချိန်ဇယားအားဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ် on- လွှဲအပ်နေတုန်း ဝယ်လိုအား။
IBC 2019 မှာစတင်ယင်း IP ကိုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ပြီး Buddy အပါအဝင်အသစ်ကတစ်လောကလုံးကိုထိန်းချုပ်မျက်နှာပြင်များနှင့် interfaces ၏အဖြစ်တစ်စုံတစ်ရာ Interface ကိုသေတ္တာ၎င်း၏လိုင်းတစ်ခုအကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ TSL ရဲ့ IP ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ပြီး Buddy ဆို GPI / O-, Serial- နှင့် IP-enabled device ကိုထိန်းချုပ်စေတဲ့အစွမ်းထက်သေးကျစ်လစ်သိပ်သည်းမှုစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းမှလေးခလုတ်ကနေချုံ့ချဲ့ခြင်း, IP ကိုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ပြီး Buddy / off'-စတိုင်လုပ်ရပ်များအပေါ် '' ရိုးရှင်းပြီးလုပ်ဆောင်သို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေး salvos ဖြစ်ပေါ်, နှင့်၎င်း၏ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအရွယ်အစား flyaway ပစ္စည်းများနှင့်အမြန်-စာနယ်ဇင်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကိုပြုလုပ်ရန်စုံလင်သောစေသည်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်နေရာမှာမဆို Interface ကိုသေတ္တာ (AIBs) ၏ကုမ္ပဏီရဲ့အကွာအဝေး, ရေဒီယို, အထူးသ A / V ကိုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲစက်မှုဇုန်နှင့်တီဗီအသံလွှင့်ဈေးကွက် segments များနှင့်အသုံးပြုသူများကိုစနစ်များကိုပေါင်းကူးနှင့်မည်သည့် programming ကိုဖျော်ဖြေခြင်းမရှိဘဲအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအောင်မြင်ရန်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ device ကိုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် interface ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဘို့, AIB အခန်းဆက် AIB-16 လည်း Ethernet, 4-လမ်း DTMF နှင့် dial-up modem ပေးအတူ2GPI / OS နဲ့မျိုးစုံ device ကိုထိန်းချုပ်လမ်းကြောင်းမှတက်ပေးထားပါတယ်။ သူတို့ကိုသင်လိုအပ်လေရာရာ၌အဆိုပါ AIBs သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး GPIs နှင့်တွင်-Air လေကြောင်းလိုင်း, လယ်သို့ tallies - မြို့ကြီးများ, ပြည်နယ်နှင့်ပင်တိုက်ကြီးအနှံ့ - အဝေးမှ။ မည်သည့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး application များအတွက် configuration ကို 'ပရိုဂရမ်မာ-အခမဲ့' 'web browser ကိုအတူလွယ်ကူသောလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
TSL ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှု Workflows မြင်ယောင်နဲ့ interface ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တစ်ခုအလိုလိုသိနှင့်လွယ်ကူသောသို့အတူတကွအားလုံး key ကိုစစ်ဆင်ရေးကိုရောက်စေဖို့ခွင့်ပြုပေးတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ-based ကိုထိန်းချုပ်မျက်နှာပြင်ပေးထားပါတယ်။ Virtual Panel များနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကိုလွယ်ကူစွာအပြည့်အဝစတူဒီယိုထိန်းချုပ်မှု, လမ်းကြောင်းပြား, signal ကိုစီးဆင်းမှုနှင့်အရင်းအမြစ်အမည်များများအတွက်ရလာဒ်ကဒိ configuring, အနည်းငယ်မျှသာလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏စနစ်များကိုထိနျးသိမျးထားနိုငျ။
ဤအတောအတွင်း FlashBoard တဲ့မျက်နှာပြင်-based နည်းပညာဆိုင်ရာခင်းကျင်းပြသစနစ်, မည်မျှပင်သတင်းအချက်အလက်ဝေမျှခြင်းအဘို့အစက်ရုံ-ကျယ်ပြန့်စစ်ဆင်ရေးကိုသြဒိနိတ်ကူညီပေးသည်။ TSL အရေးပါသောလုပ်ငန်းအသွားအလာသတင်းအချက်အလက်မြင်ယောင်မှဖောက်သည်များ '' ကိုတိုးမြှင့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် TSL သို့မဟုတ်အခြား Third-party ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့်ချောမွေ့စွာပေါင်းစပ်မှ FlashBoard ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ IBC မှာ TSL ခေတ်မီစနစ်နှင့်ကမ္ဘာကြီးနာရီ, ထ-Down ထုတ်လုပ်မှုတိုင်မား, On-လေထုနှင့် cue အလင်းအရိပ်အယောင်, On-screen ကိုအမှတ်တံဆိပ်, web-based အကြောင်းအရာ display နှင့်ဗီဒီယိုကအုပ်ကြွပ်အပါအဝင် FlashBoard ရဲ့ interface ကိုအများအပြား features တွေ၏ထို့အပြင်သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။
"ကျနော်တို့ဖောက်သည်သီးသန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုပါသို့မဟုတ်ပိုကြီးသော Third-party စနစ်များအတွင်းသူတို့ကိုပေါင်းစည်းခြင်းရှိမရှိ, ရှိသမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ချောမွေ့စွာအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါတည်ထောင်ရန်ဖို့ကွိုးစား," ဒေးဗီးစ်ကထပ်ပြောသည်။ "interfaces ၏ကျွန်ုပ်တို့၏အကွာအဝေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်မှတဆင့်တစ်ခုတည်း application များအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်လိုက်နာမှုနှင့်အတူပြည့်စုံကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့များနိုင်ပါတယ်။ "
အေျကာင္းအရာ TSL ထုတ်ကုန်များ
အဆင့်မြင့်အသံလွှင့်ဖြေရှင်းနည်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor IBC ပေါင်းစည်းမှု အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် လှံ & Arrows စာတန်းထိုး စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC TSL FlashBoard TSL ထုတ်ကုန်များ တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-09-05
ယခင်: 2019 NAB Show ကိုနယူးယောက်ကိုယ်ရေးဖိုင်: Jem Schofield
နောက်တစ်ခု: IBC2019: TVU ကွန်ယက် AI အ Technologies ကအကူအညီလူငယ်ကဏ္ဍပုံပြင်-ဗဟိုပြု Workflows မှတဆင့်ကြည့်ရှုသူများသည်မှစိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာကယ်ယူ